आज ११ गतेका मुख्य समाचार | केपि ओलिले दिए राजिनामा, कोरो*ना खो*प,नेपाल ब*न्द हुने,खाने तेल – Onlines Time
December 26, 2020 December 26, 2020 onlinestimeLeaveaComment on आज ११ गतेका मुख्य समाचार | केपि ओलिले दिए राजिनामा, कोरो*ना खो*प,नेपाल ब*न्द हुने,खाने तेल
सरकारका विरुद्धमा आक्रोश बढ्न थालेको छ । राजतन्त्र फर्किने बहस पनि बाक्लिन थालेको छ ।
प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारविरोधी आन्दोलन त्यति अस्वाभाविक नमानिएला । तर देशको गणतान्त्रिक व्यवस्थाका विरुद्धमै राजतन्त्र पुनस्र्थापनाकोे चर्चा चल्नु भने चिन्ताको विषय हो । देशमा राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिको कुरा भइरहेकोे बेला सरकारविरोधी आन्दोलन चर्किनु र राजतन्त्रको पुनः स्थापनाबारे बहस बढ्नु आश्चर्यजनक हो ।
नागरिकबाट तिरष्कृत राजतन्त्र
विसं २०४६ मा पञ्चायत व्यवस्था फाल्ने आन्दोलनबाट धर्मराएको राजतन्त्र २०६५ सालमा औपचारिकरुपमा समाप्त भएको हो । संवैधानिक राजतन्त्र तुलनात्मक रुपमा ठिक मानिए पनि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश र ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनले जनआक्रोशलाई बढावा दिएपछि नै नेपालको राजतन्त्र समाप्त भएको धेरैको ठम्याइ छ ।
नेपालमा यतिखेर राजतन्त्रको पक्षमा कि त पुराना पञ्चहरु छन् कि त नयाँ युवापंक्ति । ती युवाहरु जसले राजतन्त्रको निरङकुशता, ज्यादती र मनोमानी प्रत्यक्षरुपमा अनुभव गरेकै छैनन् ।
नागरिकको परिवर्तित शक्ति, चेतना र भावनासँग सम्झौता गर्न नचाहेर र युगसापेक्ष परिवर्तन हुन नसक्दा नै राजतन्त्र नागरिकबाट तिरष्कृत भएको हो । राजतन्त्र फाल्न आम नागरिक नै सडकमा उत्रिएका हुन् । तत्कालीन अवस्थामा राजतन्त्रको निरङकुशता, मन्डले ज्यादती, अत्याचार र मनोमानीका कुरा नभोगेका अनि आन्दोलनमा नउत्रिनेहरुलाई यो कुरा थाहा नहुन पनि सक्छ ।
तर, यतिखेर राजतन्त्र ब्युँताउने आन्दोलन चर्केकामा भन्दा निहीत राजनीतिक स्वार्थका लागि धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने दोहोरो चरित्रका मानिसहरुले देशलाई बढी राजनीतिक समस्यामा पारेका हुन् कि भन्ने आशंका बढेको छ ।
राजतन्त्र के हो ?
राजतन्त्र एक व्यक्ति (राजा) शासनको सर्वेसर्वा हुने राजनीतिक प्रणाली हो । राजालाई नागरिकले चुनेका हुँदैनन् । वंशाणुगत हुन्छन् वा राजा बन्नको लागि एकले अर्को राजालाई विस्थापित गर्छन् । राजतन्त्र संसारमा सबैभन्दा पुरानो र प्राकृतिक शासन प्रणाली हो । यस प्रणालीअनुसार राजाको छोरो वा राजपरिवारको कोही पनि व्यक्ति योग्य भए वा नभएमा पनि सिंहासनमा बस्न सक्दछ । राजा नै राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुख हुन्छ जसले महत्वपूर्ण कार्यकारी वा व्यवस्थापकीय अधिकार कायम राख्दछ ।
बीसौं शताब्दीसम्म राजतन्त्र सबैभन्दा प्रचलित र झन्डै एक मात्र शासकीय स्वरुप थियो । अहिले विश्वका लगभग ४५ सार्वभौम राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख राजतन्त्रात्मक छन् । अधिकांश राजतन्त्र संवैधानिक राजतन्त्र, जहाँ राजाको संवैधानिक र आलंकारिक भूमिका छ । देशको संविधानमा शून्य वा केही सीमित मात्र राजनीतिक अधिकार छ । यद्यपि बु्रनाई, मोरोक्को, ओमान, कतार, साउदी अरब र थाइल्यान्डजस्ता केही देशमा वंशाणुगत राजतन्त्रमा संविधानअनुसार वा चलन रीतिरिवाजबाट धेरै राजनीतिक प्रभाव कायम छ ।
गणतन्त्र कस्तो प्रणाली हो ?
गणतन्त्र प्रत्यक्ष जनसहभागिताद्वारा सबैको आत्मनिर्णय अधिकार सुनिश्चित हुने राजनीतिक प्रणाली हो । सरकार चलाउने यो यस्तो प्रक्रिया हो जसमा देशको सार्वभौम अधिकार कुनै एकजनामा मात्रै निहीत हुँदैन । गणतन्त्रमा सैद्धान्तिकरुपले देशको सर्वोच्च पदमा आम नागरिकबाट कुनै पनि व्यक्ति पदासीन हुन सक्छ ।
गणतन्त्रमा वास्तवमा सामान्य नागरिक वा तिनका बहुमतका इच्छाले आवधिक निर्वाचनद्वारा शासन व्यवस्था चल्ने गर्दछ । व्यवस्थापिकाले अलग कार्यकारी वा आलंकारिक राष्ट्रपतिको चयनसमेत गर्दछ । संसदले नै राष्ट्रपतिको चयन गर्दछ र यो लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाट हुन्छ । हाल विश्वका धेरैजसो देशमा गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली छ । आधुनिक युगमा यो नै सबैभन्दा लोकप्रिय प्रणाली हो । नेपाल विसं २०६५ सालदेखि ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’का रुपमा घोषणा गरिएको हो ।
नेपाल एकीकरणपश्चातका राजाहरूको शासकीय अवस्था
नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्रको स्थापना भएको १२ वर्ष बितिसकेको छ । नागरिकले चुनेको संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरी त्यस संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार देश अघि बढिरहेको छ । संविधान निर्माणपछि भएको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार चलाइरहेको छ ।
देशमा गणतन्त्रसहितका परिवर्तन ल्याउन संघर्ष गरेको र परिवर्तनकारी भनिएको दलकै हातमा सत्ता छ । सँगसँगै आन्दोलन गर्ने ठूलो शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा छ ।
अब ओली प्रचण्ड होइन रबि दाई प्रधामन्त्री बनुपर्छ ! हामी चुनाब जिताउछौ, राजनीतिमा आउनुस Public Review
आयो यस्तो खुसीको खबर मलेसियामा भएका विदेशी श्रमिकको लागी ! (जानकारीका लागि सेयर गराै)
प्रधानमन्त्रीले सफथ लिदा लिदै भारत बाट आयो यस्तो संदेश ,आखिर गर्न खोज्यो भारतले, (भिडियो हेर्नुहोस सेयर गराै)
ठेला खोसिएकी आमाको लागि भगवान बनिन इशा गुरुङ,आखाभरी खुशीको आसु ३ दिनमै जम्मा भयो ५ लाख बढी सहयोग
May 22, 2021 onlinestime